भोलिको राशिफल : श्रीगणेशको कृपादृष्टिले तपाईको दिन अनुकूल-प्रतिकूल कस्तो रहला ? – List Khabar
Home / जीवनशैली / भोलिको राशिफल : श्रीगणेशको कृपादृष्टिले तपाईको दिन अनुकूल-प्रतिकूल कस्तो रहला ?
भोलिको राशिफल : श्रीगणेशको कृपादृष्टिले तपाईको दिन अनुकूल-प्रतिकूल कस्तो रहला ?
admin January 10, 2022 जीवनशैली Leaveacomment 244 Views
•• दिन – मंगलवार •• नक्षत्र – अश्विनी , १४:२५ बजे उप्रान्त भरणी •• तिथि – नवमी , १७:१५ बजे उप्रान्त दशमी •• करण – कौलव १७:१५ बजेदेखि तैतिल , २९:५७ बजे उप्रान्त वणिज •• योग – सिद्ध , १४:२४ बजे उप्रान्त साध्य •• पौष २७, २०७८, मंगलवार •• 11 January, 2022
•• नवमी, पौष शुक्लपक्ष •• पोहेलाथ्व, ११४२ ने.सं. •• सूर्योदय(sunrise) – ६:५८ •• सूर्यास्त(sunrise) – १७:२६ ••
सांसारिक मामिलालाई अलग राखेर आध्यात्मिकतामा मोडिनु हुनेछ। गूढ रहस्यहरु प्रति विशेष आकर्षण हुनेछ। गहिरो ध्यानले तपाईंलाई अलौकिक महसुस गराउनेछ। बोलीमा विशेष ध्यान राख्नुहोला। आय वृद्दि हुनेछ। नयाँ कार्य आरम्भ नगर्नुहोला।
तपाईंले पारिवारिक जीवन र विवाहित जीवनमा सुख र शान्ति अनुभव गर्नुहुनेछ। परिवारका सदस्यहरू र नजिकका साथीहरूसँग उत्तम भोजन गर्नुहुनेछ। स्वास्थ्य स्वस्थ रहनेछ। धन लाभ होला। टाढा बस्ने आफन्तको समाचारले खुशी अनुभव गर्नुहुनेछ। सार्वजनिक स्थलमा मान- सम्मान प्राप्त हुनेछ।
अधूरो कार्य पूरा हुनेछ तथा कार्यमा सफलता र प्रसिद्दि प्राप्त हुनेछ। घरमा शान्ति र आनन्दको वातावरणले मन प्रसन्न रहनेछ। स्वास्थ्य स्वस्थ रहनेछ। आर्थिक लाभ होला । अफिसमा मनमुटाव हुन सक्ला।
तपाईको दिनको आरम्भ चिन्ता र निराशामा हुनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धि गुनासो रहनेछन्। नयाँ कार्य गर्नको लागि शुभ दिन रहेको छैन। आकस्मिक धन खर्च हुनेछ। प्रेमीप्रेमिका बीच वाद-विवाद हुनाले मनमुटाव हुनेछ। अत्यधिक कामुकताले मानभंगको कारण नबनोस् यस कुराको ध्यान राख्नुहोला।
नकारात्मक विचारले निराशा उत्पन्न गर्नेछ। शारीरिक र मानसिक रूपले अस्वस्थता अनुभव गर्नुहुनेछ। घरमा विसंवादित वातावरण रहनेछ। आमाबुबासँग मतभेद होला अथवा उहाँहरुको स्वास्थ्य खराब हुन सक्ला। जलाशयबाट टाढा रहनुहोला।
कुनै पनि अविचारी कदम नउठाउनुहोला। यधपी कार्यमा सफलता मिल्नेछ। प्रतिस्पर्धिलाई पराजित गर्न सक्नुहुनेछ। भाईबहिनी र छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। आर्थिक लाभ मिल्नेछ। सार्वजनिक स्थलमा मान-सम्मान मिल्नेछ।
जिद्दी व्यवहार छोडेर समाधानपूर्ण व्यवहार गर्नुहोला । तपाईको अनियन्त्रित बोलीले कसैसँग मनमुटाव हुन सक्ला। दुविधामा फसेको मनले कुनै पनि निर्णय लिन गार्हो हुनेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णय सकेसम्म नलिनुहोला।
तन-मनले खुशी र प्रफुल्लित रहनुहुनेछ। कुटुम्ब र मित्रसँग उत्तम भोजन वा भेट हुनेछ। जीवनसाथीसँग कतै भ्रमणमा जानुहुनेछ। साथै आत्मीयता पनि बढ्नेछ। आर्थिक लाभ होला । शुभ अवसरमा बाहिर जान सक्नुहुनेछ।
तपाईको दिन थोरै कष्टदायक रहनेछ। स्वास्थ्य खराब होला। पारिवारिक सदस्यसँग झगडा हुँदा मन दुःखी हुनेछ। परिणाम स्वरूप मानसिक रूपले अस्वस्थ रहनुहुनेछ। दुर्घटनाबाट बच्नुहोला। अदालती मामिलामा सावधान रहनुहोला। अधिक खर्च हुनाले आर्थिक समस्या महसुस गर्नुहुनेछ।
सामाजिक क्षेत्रमा पेसा र अन्य क्षेत्रमा दिन लाभदायक रहनेछ। आफन्तसँग बाहिर घुम्न जानुहुनेछ। मांगलिक प्रसंग उपस्थित हुनेछ तथा स्त्री मित्र र पुत्रबाट लाभ मिल्नेछ। विवाहोत्सुक युवक- युवतिको वैवाहिक समस्या हल हुनेछ।
सबै काम सहजै सम्पन्न हुनेछ। रोजगार – व्यवसायको स्थान अनुकूल रहनेछ र काम सफल हुनेछ। वृद्द र उच्च पदाधिकारीको कृपादृष्टिको कारण मानसिक रूपले कुनै पनि प्रकारको बोझबाट मुक्त रहनुहुनेछ। घरायसी जीवनमा आनन्द मिल्नेछ।
नकारात्मक विचारले आफुमा असर नहोस् यस कुराको ध्यान राख्नुहोला। मानसिक अस्वस्थताले समस्यामा रहनुहुनेछ। स्वास्थ्यको सम्बन्धमा गुनासो रहनेछ। उच्च अधिकारीसँग सावधानीपूर्वक कार्य गर्नुहोला। प्रतिस्पर्धी आफ्नो चालमा सफल हुनेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णय नलिनुहोला।
Previous यी युवतीको यो भिडियो बन्यो भाइरल, युवाले कमेन्टमा भने “उमेरमा यस्तै हो” (भिडियो सहित)
Next २०२२ मा यी ४ राशिलाई हुदै छ मालामाल भने बाकीलाई सामान्य, जानकारी लिनुहोस कुन कुन राशिको भाग्य चम्किदै छ ?